သွေးမဲ့ကုသမှု တိုးတက်ရေး သမိုင်းဝင် ညီလာခံ
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီဘမ်ဘာ ဆာမိုအာ ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဗီယက်နမ် ဘေလဇ် ကရီအိုး မြန်မာ ယူကရိန်း ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အဇာဘိုင်ဂျန် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အီတလီ
မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈
သွေးမဲ့​ကုသမှု တိုးတက်ရေး သမိုင်းဝင် ညီလာခံ​ကို ပါ​ဒူ​အာ တက္ကသိုလ်​မှာ လက်ခံ​ကျင်းပ
ရောမ။ ၂၀၁၇၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ သောကြာ​နေ့မှာ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆေး​သုတေသန ပညာရှင်​တွေ၊ ဥပဒေ​ပညာရှင်တွေဟာ “အရွယ်ရောက်​လူနာ သွေးသွင်း​ဖို့ ငြင်းဆို​ရင် ဘယ်​ကုသနည်း​တွေ ရွေးချယ်​နိုင်သလဲ—သွေး​ဖြင့် အသက်ကယ်​ပါ ၂၀၁၇” ခေါင်းစဉ်​ရှိ ညီလာခံ​တက်ဖို့ အီတလီ​နိုင်ငံ၊ သက်တမ်း​အရ​င့်​ဆုံး ပါ​ဒူ​အာ တက္ကသိုလ်​မှာ စုရုံး​ခဲ့​ကြတယ်။ ညီလာခံ​ကို အီတလီ​နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် အီတလီ​နိုင်ငံက သိပ္ပံ​ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ၂၅ ခု​ကျော်​က က​မ​က​ထ ပြုခဲ့တယ်။
ဒေါက်တာ လုကာ ဝီလ်​တက်
အစဉ်အလာ​အရ ခက်ခဲတဲ့​ကုသမှု၊ ခွဲစိတ်​ကုသမှု လုပ်တဲ့​အခါ သွေးသွင်း​ခြင်း​ကို အန္တရာယ်​ကင်းတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အသက်ကယ်​နည်း​အဖြစ် ယူမှတ်ခဲ့​ကြတယ်။ ညီလာခံ​တက်ရောက်သူများ​စွာ​ဟာ အဲဒီ​အစဉ်အလာ​ကို လက်မခံကြ​တော့​ဘူး။ ရောမမြို့၊ ဥရောပ​ဆေးရုံ​က နှလုံး​ခွဲစိတ်ကု​ပါရဂူ လုကာ ဝီလ်​တက် ဒီလို​ရှင်းပြတယ်– “ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်ရ​တာ​က သွေးသွင်း​ခြင်း​ဟာ အန္တရာယ် ဖြစ်စေ​နိုင်တယ်၊ ကုသမှု အတော်များများမှာ သွေးသွင်း​ဖို့ မလိုဘူး။”
ဒေါက်တာ ဝီလ်​တက်​နဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ တခြား​ဆရာဝန်တွေ​က ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ​အပြင် သွေးသွင်း​ကုသခြင်း​နဲ့​ဆက်စပ်​နေတဲ့ သေဆုံးမှု၊ ဖျားနာမှု၊ ဆေးရုံတက်​ချိန်၊ သွေးသွင်း​ကုသမှု​ကြောင့် တခြား​ဆိုးရွား​တဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်​စတဲ့ သိပ္ပံ​ဆိုင်ရာ​လေ့လာမှု​တွေ​ပေါ် အခြေခံပြီး ကောက်ချက်ချ​ကြ​တာ ဖြစ်တယ်။ *
“ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်ရ​တာ​က သွေးသွင်း​ခြင်း​ဟာ အန္တရာယ် ဖြစ်စေ​နိုင်တယ်၊ ကုသမှု​များစွာမှာ သွေးသွင်း​ဖို့ မလိုဘူး။”—ဒေါက်တာ လုကာ ဝီလ်​တက်၊ နှလုံး ခွဲစိတ်ကု​ဆရာဝန်၊ ဥရောပ​ဆေးရုံ၊ ရောမမြို့
သွေးသွင်း​စရိတ် ကြီးမားမှု​အပြင် သိပ္ပံ​အထောက်အထား​ကြောင့် ကမ္ဘာ့​ကျန်းမာရေး​အဖွဲ့ (WHO) က ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ လူနာ​သွေး စီမံခန့်ခွဲမှု (PBM) ကို အကောင်အထည်ဖော်​ဖို့ လှုံ့ဆော်​ပေးခဲ့တယ်။ PBM ဆိုတာ ကျန်းမာရေး၊ လူနာ​ဘေးကင်းရေး၊ ခွဲစိတ်​ကုသမှု​ရလဒ်ကောင်း ရှိ​ရေး၊ သွေးသွင်း​ခြင်း​ကို သိသိသာသာ လျှော့ချ​ရေး​အတွက် နည်း​စနစ်​အမျိုးမျိုး၊ လုပ်ထုံး​လုပ်​နည်း​အမျိုးမျိုးကို အာရုံစိုက် သုံးသပ်​ကြတယ်။ WHO က ဆုံးဖြတ်ချက်​တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်​ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်​နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံမှာ PBM ကို အကောင်အထည်ဖော်​ကြဖို့ တိုက်တွန်း​လိုက်တယ်။
ပါမောက္ခ စတက်ဖနီ​ယာ ဗာ​ဂ​လီ​ယို
ရောမမြို့၊ စ​န်​အန်ဒရေ​ယာ တက္ကသိုလ်​ဆေးရုံ​က သွေးသွင်း​ကုသမှု ဆရာဝန်​ကြီး ပါမောက္ခ စတက်ဖနီ​ယာ ဗာ​ဂ​လီ​ယို​က PBM နဲ့​ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့​တယ်။ အရင်တုန်းက ဆေး​ကုသ​တဲ့အခါ လှူဒါန်း​ထားတဲ့​သွေး စီမံခန့်ခွဲမှု​ပေါ် မူတည်​ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ “လှူဒါန်း​ထားတဲ့​သွေး​ကို မဟုတ်ဘဲ လူနာ​ရဲ့​သွေး​ကိုပဲ အာရုံစိုက်​လာပြီ” လို့​ပြောတယ်။ PBM ရဲ့​ရည်ရွယ်ချက်​တစ်ခုက “ကုသ​နေစဉ်​အတွင်း လူနာ​သွေး ဆုံးရှုံးမှု နည်း​အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အာရုံစိုက်​ခြင်း” ဖြစ်တယ်။ လူနာ​သွေး​ကို ထိန်းသိမ်း​တဲ့ ဆေးပညာ​တွေဟာ “တကယ်တော့ ပို​အရည်အသွေး​ကောင်းတဲ့ ကုသနည်း ဖြစ်တယ်” လို့ ပါမောက္ခ ဗာ​ဂ​လီ​ယို ရှင်းပြခဲ့တယ်။
ဗီရို​နာ တက္ကသိုလ်​ဆေးရုံ​က အထွေထွေ ခွဲစိတ်​ဆရာဝန် ဒေါက်တာ တို​မာ​ဆို က​မ်​ပတ်​နာ​ရို​က သွေးမဲ့​ကုသနည်း​တွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အတည်​ပြုခဲ့တယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်​နှစ်တွေ​နှောင်းပိုင်း​မှာ အ​ရှုပ်ထွေး​ဆုံး ဝမ်းဗိုက်​ပိုင်း ခွဲစိတ်​ကုသမှု​ဆိုင်ရာ အချက်အလက်​တွေကို ဆန်းစစ်​ပြီးနောက် ဒီလို​ကောက်ချက်​ချတယ်– “သွေးမသွင်း​တဲ့​လူနာ​တွေဟာ သွေးသွင်း​တဲ့​လူနာ​တွေ​နဲ့ နှိုင်းယှဉ်​ရင် ရောဂါ​သစ် တိုး​မှု​နှုန်း၊ သေဆုံးမှု​နှုန်း ပိုနည်း​တယ်။”
“သွေးမသွင်း​တဲ့​လူနာ​တွေဟာ သွေးသွင်း​တဲ့​လူနာ​တွေ​နဲ့ နှိုင်းယှဉ်​ရင် ရောဂါ​သစ် တိုး​မှု​နှုန်း၊ သေဆုံးမှု​နှုန်း ပိုနည်း​တယ်။”—ဒေါက်တာ တို​မာ​ဆို က​မ်​ပတ်​နာ​ရို၊ အထွေထွေ ခွဲစိတ်​ဆရာဝန်၊ ဗီရို​နာ တက္ကသိုလ်​ဆေးရုံ
တွဲဖက် ပါမောက္ခ အန်​နာ အာ​ပ​ရီ​လေ
ညီလာခံ​တက်ရောက်​လာတဲ့ တခြား​သူတွေလို​ပဲ ဒေါက်တာ က​မ်​ပတ်​နာ​ရို​က သွေးမဲ့​ကုသနည်း ရှာကြံ​ဖို့ ဆရာဝန်တွေ​ကို လှုံ့ဆော်ပေး​ခဲ့​တဲ့ ယေဟောဝါ​သက်သေတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောတယ်။ ပါ​ဒူ​အာ တက္ကသိုလ် ဆေး​ဥပဒေ တွဲဖက်​ပါမောက္ခ အန်​နာ အာ​ပ​ရီ​လေ ဒီလို​ပြောတယ်– “ယေဟောဝါ​သက်သေတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သွေးသွင်းတာ​ကို ငြင်းဆို​ပိုင်ခွင့်​ကိစ္စ​ကို ပေါ်ပေါက်​စေခဲ့​သူတွေ၊ ဒီ​အကြောင်းကို လူတိုင်း စဉ်းစား​သုံးသပ်​အောင်၊ သွေး​ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့​သုံးဖို့ ကူညီပေး​ခဲ့​သူတွေပါ။”
“ယေဟောဝါ​သက်သေတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သွေးသွင်းတာ​ကို ငြင်းဆို​ပိုင်ခွင့်​ကိစ္စ​ကို ပေါ်ပေါက်​စေခဲ့​သူတွေ ... ပါ။”—အန်​နာ အာ​ပ​ရီ​လေ၊ ဆေး​ဥပဒေ တွဲဖက်​ပါမောက္ခ၊ ပါ​ဒူ​အာ တက္ကသိုလ်
မေ့​ဆေး၊ နှလုံး၊ သားဖွား​မီးယပ်၊ သွေး၊ ကင်ဆာ၊ အရိုး​စတဲ့ ဘာသာရပ်​မျိုးစုံ​က အထူးကု ဆရာဝန်​ကြီး​တွေ ညီလာခံ​မှာ တင်ဆက်​ခဲ့​ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလေး​ပေးတဲ့ အကြောင်းအရာက အတူတူ​ပါပဲ– ဆေး​အဖွဲ့အစည်း​တွေ၊ ဥပဒေပြု​စု​သူတွေ၊ သာမန်​ပြည်သူတွေ​အားလုံးကို ပညာရှင်​တွေ ထုတ်ဝေ​ထားတဲ့ အချက်အလက်၊ အတွေ့အကြုံ​တွေ၊ PBM နည်း​စနစ်​တွေ ဖွင့်ပြ​သင့်တယ်။
ပါ​ဒူ​အာ တက္ကသိုလ် မော်​ဂါ​ဂ​နီ စာသင်​ခန်း​မှာ တက်ရောက်​လာ​သူတွေ တင်ဆက်မှု​တစ်ခုကို နားထောင်​နေကြစဉ်။
ဒေါက်တာ ဝီလ်​တက် ဒီလို ထပ်​ပြောတယ်– “လူ့​ကိုယ်ခန္ဓာ ခွဲစိတ်​ကုသမှု​တွေ​ထဲ​က မျက်မှောက်ခေတ် ခွဲစိတ်ကု​သနည်း​တွေ​ထဲမှာ ပင်မ​သွေးလွှတ်ကြော ခွဲစိတ်​ကုသ​ရတာက အကြီးဆုံး ခွဲစိတ်​ကုသမှု ဖြစ်တယ်။ ... ဒါကို သွေးမဲ့​ခွဲစိတ်​ကုသ​ပေး​နိုင်တယ်​ဆိုရင် တခြား​ဘယ်​ကုသမှု​ကို​မဆို လုပ်နိုင်ပြီ။”
ဒေါက်တာ တို​မာ​ဆို က​မ်​ပတ်​နာ​ရို
အထွေထွေ ခွဲစိတ်​ဆရာဝန်၊ ဗီရို​နာ တက္ကသိုလ် ဆေးရုံ
“သိပ္ပံ​စာပေတွေ​နဲ့ စာရင်း​ဇယား​တွေ​အရ သွေးသွင်း​ကုသ​တဲ့ လူနာ​တွေဟာ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါပိုး ဝင်​တတ်​ပြီး သေဆုံး​တာ ပို​များတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးသွင်း​ခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းက တကယ် ဆက်စပ်​နေတယ်။”
“တကယ်တော့ ယေဟောဝါ​သက်သေ လူနာ​တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ​က လူနာ​အားလုံး​အတွက် ကုသနည်း​တွေ​အပေါ် ဩဇာ​သက်ရောက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို အများကြီး​တိုးတက်စေ​လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ တွေ့တဲ့​အတိုင်းပဲ လူနာ​အားလုံး​အတွက် သွေး​အသုံးပြု​တာ သိသိသာသာ နည်းလာ​ပြီ။”
ပါမောက္ခ ပီ​ယာ ဒီ ဘီ​နီ​ဒက်​တို
မေ့​ဆေးဆရာဝန်​ကြီး၊ စ​န်​အန်​ဒ​ရီ​ယာ တက္ကသိုလ် ဆေးရုံ၊ ရောမမြို့
“ဒီနေ့ ဒီမှာ​ရောက်ရှိ​နေတဲ့ အလုပ်ဖော် မေ့​ဆေးဆရာဝန် ပါမောက္ခ ပါ​အာ​လို ဂ​ရာ​စီ​နဲ့ ကျွန်မ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်​လုံးလုံး သွေးမဲ့ ခွဲစိတ်​ကုသမှု​အပေါ် အမြင်​တူတယ်။ ပထမဆုံး​အကြိမ် သွေးမဲ့ အရိုး​ခွဲစိတ်​ကုသ​ဖို့ သဘောတူ​တဲ့​သူကို ကျွန်မတို့​နှစ်ယောက် တွဲ​ပြီး ခွဲစိတ်​ကုသ​ပေးခဲ့​ကြတယ်။ ... နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ သွေးမဲ့ ခွဲစိတ်ကု​သနည်း​ကို တကယ်​ကျင့်သုံး​လာကြပြီ။ အခုတော့ လူတိုင်း လက်ခံ​လာ​ကြပါ​ပြီ။”
ပါမောက္ခ အယ်​ဖရက်​ဒို ဂူ​ဂ​လင်​မီ
အထွေထွေ ခွဲစိတ်ကု ပါမောက္ခ၊ ဗီရို​နာ တက္ကသိုလ် ဆေးရုံ
“ယေဟောဝါ​သက်သေ လူနာ​တွေကို ကုသ​ပေး​နေတာ အနှစ် ၃၀ နီးပါး ရှိပြီ။ သွေးသွင်း​ခြင်းနဲ့​ဆက်နွှယ်​တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့​ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့​အတွက် တကယ့်​မက်လုံး​ပဲ။ ယေဟောဝါသက်သေတွေ​နဲ့​ပဲ ပတ်သက်​တာ မဟုတ်ဘူး။”
ဒေါက်တာ ဆ​မ်​မြူ​အယ် မ​န်​ကူ​ဆို
ညီလာခံ သဘာပတိ၊ နှလုံး ခွဲစိတ်ကု​ဆရာဝန်၊ တူ​ရင် တက္ကသိုလ်၊ မာ​ရီ​အာ ပီ​ယာ တက္ကသိုလ်
“သွေးသွင်းတာ​ကို ငြင်းပယ်​တဲ့ လူနာ​တွေ၊ အကြောင်းရင်း​တွေ ပို​များ​လာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ သွေးသွင်း​ခြင်း အန္တရာယ်​တွေ​ကြောင့်​ပဲ မဟုတ်ဘူး။ သွေးမဲ့​ကုသတာက ပို​ကောင်း​မှန်း သိလာ​ကြလို့ပဲ။ လူနာ​တစ်ယောက်​အနေနဲ့ ကျွန်တော် သွေးသွင်း​ဖို့ ငြင်းဆို​ရင် ပို​ကောင်းတဲ့​ကုသနည်း ရရှိမယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်း ကြိုတင်​ပြင်ဆင်​ပေး​ကြ​လိမ့်မယ်။ အရာရာကို အသေးစိတ် ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်ကြ​လိမ့်မယ်။ သွေး​ထွက်​နည်း​မယ်။ ခွဲစိတ်​ကုသ​နေတုန်း သွေး​အများကြီး ဆုံးရှုံး​ရင် ဆရာဝန်တွေ​က ကျွန်တော့်​သွေး​ကိုပဲ ပြန်​သွင်း​ပေး​ကြမယ်။ လုပ်ထုံး​လုပ်​နည်း​အတိုင်း အတိအကျ လုပ်ဆောင်​ကြမယ်​ဆိုတာ အာမခံတယ်။ ဒါကြောင့် [သွေးမသွင်း​ဘဲ] ကုသ​ပေးဖို့ တောင်းဆို​ကြ​တာ ယေဟောဝါ​သက်သေ လူနာ​တွေ​ပဲ မဟုတ်တော့ဘူး။”
ဒေါက်တာ ဆာ​ဂျီ​အို ဖူ​စီ
ရာဇ​ဝတ် တရားသူကြီး၊ အငြိမ်းစား အတိုင်ပင်ခံ၊ မီ​လ​န် အယူခံ​တရားရုံး၊ ဂုဏ်​ထူး​ဆောင် သဘာပတိ၊ အထက်​တရားရုံး၊ အီတလီ
“ဆေးပညာ​မှာ လူ​ပုဂ္ဂိုလ်​နဲ့ သူ့​ဂုဏ်​သိက္ခာ​ကို အရင်ဆုံး လေးစား​သင့်တယ်။ . . . လူနာ​ရဲ့​စကားကို နားမထောင်​တာ​ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်​သိက္ခာ​ကို ချိုးဖောက်မှု​ကြီး​ပဲ။ အဲဒါက လူသား​အဖြစ်ကို ငြင်းပယ်​ရာ​ရောက်တယ်။”
International: David A. Semonian, Office of Public Information, +1-84​5-5​2​4-3​0​0​0
Italy: Christian Di Blasio, +39-0​6-8​7​2​9​4​1
^ အပိုဒ်၊4ဥပမာ၊ မကြာသေးခင်က ဩစတြေးလျ အနောက်ပိုင်း​မှာ သွေးသွင်း​ကုသမှု​အကြောင်း လေ့လာပြီး ဂျာနယ်​တစ်ခုမှာ ထုတ်ဝေ​ခဲ့​တဲ့ သွေးသွင်း​ခြင်း ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ညီလာခံ​မှာ ရည်ညွှန်း​ဖော်ပြခဲ့တယ်။ စာရေး​ဆရာတွေက လူနာ​သွေး စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ကို ခြောက်​နှစ်​ကြာ ကျယ်ကျယ်​ပြန့်​ပြန် လေ့လာမှု​ရလဒ်ကို ဖော်ပြ​ကြတယ်။ အဓိက ဆေးရုံကြီး​လေးခု​မှာ လူနာ ၆၀၅,၀၄၆ ယောက်ရဲ့ အချက်အလက်​တွေကို ဆန်းစစ်​လေ့လာ​ခဲ့​ကြတယ်။ လေ့လာမှု ပြုလုပ်​နေစဉ်​အတွင်း သွေး​အသုံးပြုမှု ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျ​သွားတယ်။ လူနာ​သေဆုံးမှု ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆေးရုံတက်​သူ ပျမ်းမျှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆေးရုံ​အတွင်း ကူးစက်ရောဂါ​ရ​မှု ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ နှလုံး​ဖောက်​ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပွားမှု ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်း​သွားတယ်။ PBM အစီအစဉ်ကို အကောင်း​အထည်​ဖော်​မှု​ကြောင့် လူနာ​တွေ ရလဒ် ပို​ကောင်း​လာကြတယ်။ သွေး​အသုံးပြုမှု လျော့နည်းလာ​တယ်။ ကုန်ကျ​စရိတ် သက်သာ​စေတယ်။
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ သွေးမဲ့​ကုသမှု တိုးတက်ရေး သမိုင်းဝင် ညီလာခံ​ကို ပါ​ဒူ​အာ တက္ကသိုလ်​မှာ လက်ခံ​ကျင်းပ
ဒေါက်တာ အယ်ဖရီဒို ဂတ်လီမီနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း
ဒေါက်တာ ပိုင် ဒီ ဘန်နဒက်တိုနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း
အီတလီ ဆေး​ညီလာခံ​ကြီး နှစ်ခု​မှာ ဆရာဝန်တွေ​က သွေးမသွင်း​ဘဲ ကုသ​နိုင်တဲ့ နည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားကြ
သွေးမဲ့​ဆေး​ကုသမှု​နဲ့​ပတ်သက်ပြီး ကနေဒါ​နိုင်ငံက ဆရာဝန်​ငါး​ဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်​များ
ပါမောက္ခ မက်​စီ​မို ဖ​ရန်​ချီ (M.D.) နဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခန်း
ပါမောက္ခ အန်တိုနီယို ပင်​နာ (M.D.) နဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခန်း
လုကာ ဝီလ်​တက် (M.D.) နဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခန်း